Haweenka Kismaayo oo Billaabay Olole lagu soo Celinayo Bilicdii Magaalada - iftineducation.com
iftineducation.com – Haweenka ku dhaqan magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka J/hoose ayaa bilaabay olole nadaafadeed oo ay doonayaan in ay kusoo celiyaan bilicdii ay lahayd magaalada Kismaayo, iyadoo la arkayo haween aad u tiro badan oo howlo nadaafadeed ka wada dhammaan xaafadaha magaalada.
Haweenkan oo iskood isu xilqaamay ayaa waxa ay howlahani nadaafadeed si isku mid ah uga bilaabeen shanta xaafadood ee ay ka koobantahay magaalada Kismaayo, iyadoo aysan jirin cid gacan ku siineeysa howlaha ay hayaan.
Gudoomiyaha ururka haweenka Jubooyinka Batraan Muxumed C/dulle oo warbaahinta la hadashay ayaa sheegtay in ololahani uu yahay mid ay doonayaan in ay ku nadiifiyaan qashinka yaal gudaha magaalada, iyadoo sheegtay in haweenku ay iskood isu xilqaameen.
“Cid dhaqaale nagu siineeyso ma jirto, anaga ayaa iskeen isu xilqaannay, haweenka Jubbaland nabad ayay rabaan, horumar ayay rabaan, caafimaad ayay rabaan, haweenku waxay diyaar u yihiin in ay qeybtooda ka qaataan nabadda iyo dib u dhiska dalka,” ayay hadalkeeda raacisay.
Wadada dheer ee laamiga ah ee marta bartamaha magaalada Kismaayo ayay haweenkani waxa ay sidoo kale ka qaadeen carro fara badan oo dabooshay, waxaana tallaabadaasi si diiran usoo dhaweeyay gaadiidleeyda oo markii hore dhib ku qabay bacaadka daboolay laamiga.
Ololahan nadaafadeed ee ka soconaya magaalada Kismaayo ayaa kusoo beegmaya xilli maamulka Jubba uu dhawaan qalab lagu horumariyo nadaafadda ku wareejiyay ururka haweenka ee gobollada Jubooyinka.